Niagara Launcher dia rivotra madio madio ho mpandefa fampiharana manokana | Androidsis
Niagara Launcher dia fampiharana izay tsy ampoizina amin'ny fomba fahazoany ny lna inona ny birao, na ny ampahany lehibe indrindra amin'ny finday; misaraka dia, fampandrenesana. Izany no mahatonga ny fomba fiasa amin'ny maha-mpandefa fampiharana azy mivantana mankany amin'ny fananana traikefa hafa tena hafa tanteraka amin'ny Nova Launcher, Pixel Launcher ary ny hafa.
Ka faly izahay fa misy ny mpamorona antoko fahatelo izay manohy miloka amin'ny fitondrana zavatra tsara, ary betsaka kokoa raha toa ka toa ny Niagara Launcher izy ireo. Ary toa izany napetraka tamin'ny vatasarihana fampiharana mahazatra izahay, ny birao sy ny fihetsika hafahafa hampiakatra ny Google Now na hiova eo anelanelan'ny efijery birao samihafa. Niaraka lavitra an'io daholo i Niagara.
1 Mpandefa iray izay mifangaro amin'ny fampandrenesana
2 Niagara launcher sy ny fampandrenesana azy
3 Rivotra madio madio
Mpandefa iray izay mifangaro amin'ny fampandrenesana
Niagara Launcher dia manandrana mametraka ny zava-drehetra tena tsy mitovy amin'ny birao findainao, fa tsy manadino ny zava-dehibe indrindra momba ny iray: ny fampandrenesanao sy ny lisitr'ireo fampiharana lehibe napetraka. Andao lazaina fa ny zavatra rehetra dia nalamina tamin'ny fomba iray izay ahafahan'ny tanana iray miditra amin'ny fampiharana izay tianao na mamaly izany hafatra WhatsApp izany.
Izy io dia amin'ny alàlan'ny fametrahana andianà fampiharana ankafizinao amin'ny birao miaraka amin'ny lisitr'izy ireo hahazoana fidirana haingana amin'ny paompy vitsivitsy. Izy io dia ao amin'ny interface interface mihitsy mba hidiranao amin'ireo rindranasa rehetra izay hahitanao ny soatoavin'ity fampiharana ity. Izany hoe, ny traikefa omeny hahazoana ny Gmail, miaraka amina sary mihetsika tena manaitra, dia mihoatra ny tonga lafatra hahafantarana fomba hafa ifandraisana amin'ny finday.
Izany no fahasambarany lehibe indrindra. Tsy izany ihany fa, anko amin'ireo fampiharana tianao (preselected hatramin'ny fotoana voalohany nanamboaranao ny Niagara Launcher), hanana ny fampandrenesana mivantana eo amin'ny birao ianao miaraka amin'ireo sary famantarana ny laharam-paositra sy maro hafa.
Niagara launcher sy ny fampandrenesana azy
Manontany tena ianao izao raha ho afaka hamaky ireo fampandrenesana ireo izahay. Izany tokoa, miaraka amin'ny fihetsika miankavanana ho azonao atao ny mamaky azy feno, afaka mamaly azy haingana aza avy amin'ny biraonao findainao.
Izahay koa alohan'ny mpandefa izay tsy manana na inona na inona toy ny hitsin-dalana avy amin'ny fampiharana (raha manana Android Nougat ianao na avo kokoa), mpilalao mozika hiditra amin'ireo lohahevitra tianao indrindra, ary afaka misoratra anarana izay fampiharana ampiasainao indrindra aza ianao hametrahana azy ireo ao anaty lisitra tianao indrindra.
Miteny mazava, Niagara Launcher dia rindrambaiko minimalista vaovao izay madio madio ho an'ny sokajin'ny mpandefa olona be dia be ao amin'ny rafitra fiasanay finday ankafizinay.
Tokony holazaintsika koa izany dia ao anatin'ny dingana beta, noho izany dia mbola vonona ny manafotra bibikely sy mampiditra endri-javatra vaovao izy. Na dia afaka niara-niasa tamin'i Niagara aza izahay, ny marina fa miasa tsara izy io ary ny zavatra niainana nalaina dia nosamborintsika hatramin'ny voalohany. Afaka minitra vitsivitsy na mihoatra ianao vao hahalala ny fomba fahazoan'ny mpandefa launcher iray, fa angamba taty aoriana tsy afaka miverina amin'ny Nova Launcher akory ianao na amin'ny maro hafa.
Rivotra madio madio
Ankoatra ny voalaza etsy ambony, dia misy koa tafiditra tao Niagara Launcher amin'ny fikarohana google, na dia tokony hampavitrikao azy amin'ny setting ianao. Izy io koa dia manome fanohanana maody maizina, fironana ankehitriny ary Inona no hitantsika izao ao amin'ny YouTube.
Tsy hadino koa fa afaka mampiasa fonosana ianao, ataovy boribory ny sary masina na asehoy miafina ao anaty tianao indrindra ny abidia. Izany dia tsy manana safidy fanamorana firy, saingy hoy aho, dia fampiharana amin'ny beta izay mampanantena zavatra betsaka. Hiankina amintsika ny hanome azy elatra hanombohana manidina sy hahita mpandefa feno mandritra ny herintaona izao.
Niagara Launcher anananao ao amin'ny Google Play Store maimaimpoana ao anatin'io fanjakana beta io. Mpandefa launcher izay manolotra traikefa tena hafa amin'ny iray ananantsika ao amin'ny fivarotana app. Noho io antony io dia mendrika ny manandrana izany ary manapa-kevitra raha hijanona ao amintsika io.
Niagara launcher: vaovao / madio
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Niagara Launcher, mpandefa fampiharana ho an'ireo mpampiasa mitady zavatra hafa
Tonga ao amin'ny Tinder ny "Top Picks": lisitry ny "match" azo atao isan'andro sy manokana